एजेन्सी, पुर्व पोर्न स्टार तथा बलिउडकी लैला सन्नी लियोन केहि समय यता विभिन्न वादविवादमा चर्चामा आईरहेकी छिन् । सन्नीलाई बलिउडमा आईटम गर्लको रुपमा हामी प्राय: देखि रहेका हुन्छौ । पोर्न क्षेत्र छोडेपछि उनी बलिउडमा प्रवेश गरेर अन्य कार्यक्रमहरु पनि चलाउने गर्थिन । तर अब सन्नी पुन तनावमा फस्दै गएकी छिन् ।
सन्नीको विरुद्धमा केश दर्ता गरिएको छ । सन्नीलाई लिएर उनको सोसाइटीका केही व्यक्तिहरुले आपत्ति जनाएका छन्। हाल सन्नी चैन्नईमा आफ्नो चलचित्रको शुटिङमा व्यस्त देखिन्छन् र यसै शिलशिलामा उनी एक डान्स इभेन्ट एटेन्ड गर्नको लागी गएकी थिइन् । त्यस पछि एक समाजसेवीले उजुरी गरेका छन् । उजुरीमा उनले भने सन्नी पोर्नोग्राफीलाई प्रमोट गरिरहेकी छिन् । अब यो केशले सन्नीलाई कस्तो निष्कर्ष दिन्छ त्यो भने हेर्न बाकी नै रहेको छ ।
प्रकाशित : सोमबार, माघ २९, २०७४१४:३२
सोनम कपूरले ट्वीटरमा सोनाक्षी सिन्हासँग मागे माफी, कारण थाहा पाउनुभएमा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !
पूर्व पोर्नस्टार सन्नी लियोनीका निकै हट यी ९ तस्विर जसले विश्वभर पिट्यो तहल्का ! [ तस्विरसहित ]
सारुख खान र सलमान सगँ मलाई तुलना गर्नु भनेको सबै भन्दा ठुलो पाप हो– रणवीर
चर्चित टेनिस स्टारले शेयर गरिन् टपलेस भिडियो, दिईन् यस्तो संदेश (भिडियो)
के नायिका रेखा र छबिको सम्बन्ध सुध्रिएकै हो त? गरिन् यसरी तारिफ!
जन्मदिन विशेष: कसरी रह्यो इमरान हाशमीको नाम ‘सीरियल किसर’, यो फिल्ममा गरे अहिले सम्मकै लामो ‘किस’
सुध्रिएनन् संजय दत्त ! रक्सिको नशामा रहेका संजयले खुल्लेआम फोटोग्राफरलाई दिए यस्तो गालि ![भिडियो सहित]